SomaliaReport: Lix Ruux oo La Qabtay
Jaamac ayaa sheegay inay xoogagga Al-shabaab qabteen ilaa lix qof oo loga shakisan yahay inay gacan saar la lahaayeen ciidamada dawladda ee weerarada soo qaaday xalay.
Dadka la qabqabtay ayuu Jaamac sheegay in laga soo qabtay loojajka iyo hoteelada eek u yaala badhtamaha magaalada iyo agagaarka koosinka. Ciidamo hubaysan oo ka tirsan Al-shabaab ayaa lagu soo waramayaa inay subaxnimadii axadda ay socdaal kormeerid ah ku wadeen badhtamaha iyo xaafadaha ku hareeraysan saldigga dhexe ee bilayska.
Sarkaal dawladeed oo ka gaabsaday inaan magaciisa la shaacin ayaa wargayska Somalia Report u xaqiijiyey weerarkan balse ka gaabsaday inuu faahfaahin dheeri ah ka bixiyo maadaama, sida uu yidhi, ay arintaasi dhaawici karto qorshahoodoa kale eek an xiga. “ ciidamadeenu waxay qaadeen weerarkaas, waxayna waxyeelooyin culus gaadhsiiyeen cadawga, ka dibna waxay ku soo noqdeen aagaggoodii, waxayna ahayd qorhse khidad istaraatiijiyadeed ah”.
Saraakiisha Al-shabaab ayaan wali macluumaad laga helin.